MUSCARI (BASBAASKA YAR, JILIBKA KHAFIIFKA AH): NOOCYADA IYO NOOCYADA UGU CAAMSAN - WARSHAD ORNAMENTAL KORAYA
Liistada noocyada Muscarika
Muscari (jamac Muscari) - Caan ku ah dhaqanka qurxinta hore ubaxa guga. Qaadashada aqoonsiga sababtoo ah boogaha buluuga ah ee jilicsan ee bluebells, qaabka u eg haramka yar yar. Sidoo kale warshadan yar-bulbo ah waxay u baahan tahay beeralayda sababtoo ah ubax hore iyo daryeelka aan qabin. Ubaxa wuxuu leeyahay magacyo badan. Inta badan waxaa la yiraahdaa magacyada jajabka jilicsan, basbaaska iyo boogaha. Mid kasta oo ka mid ah magacyadu waxay leeyihiin asal u gaar ah.
Ma taqaanaa? Ubaxa wuxuu magaciisa ugu horeeyay sababtoo ah isku midka la midka ah ee leh xajmiga iyo qiyaasta miisaanka. Sidoo kale, dadku waxay ogaadeen in abeesadu inta badan ku nool yihiin meel u dhow dhirtaas, taas oo ah sababta ay ugu yeeraan basalaha cawska ama cawska. Inta badan, xaafaddan waxaa lagu sharraxay xaqiiqda ah in ubaxa iyo masaska labaduba jecel yihiin kulaylka iyo qorraxda. Ubax Mucaarid ah oo lagu magacaabo Botanist Botanist Philip Miller, sidaas oo kale oo sheegaysa urka dhirta, oo la mid ah muscada.
Intaa waxaa dheer, ee England dhaqanka this waxaa lagu magacaabaa canjeelada canab ah (inflorescences waxoogaa la mid ah farabadan of canab), iyo France - lilac earthen.
Waxaa jira khilaafyo qaar ka mid ah qoysaska reer Muscab ah. Saynisyahanada qaarkood waxay u adeegsadaan jilitaanka jiirka ee qoysaska of asparagus, kuwa kale waxay door bidaan in ay tixgeliyaan jilicsanaanta, iyo horraanba warshadkan ayaa lagu daray liiska qoysaska eeyaha.
Muscari genus wuxuu leeyahay 63 nooc. Noocyada dhirta waxay ku kala duwan yihiin midabada, midabada iyo qaababka of inflorescences, muddada ubax, dhererka dhererka, heerka caabiga u dhaxeeya dhaxan. Waxaan kugu martiqaadaynaa in aad barato noocyada iyo noocyada caadiga ah ee Muscari, oo loo isticmaalo dhaqanka beerta.
Furaha lagu garto noocyada Muscarika
Furaha aqoonsiga noocyada dhirta - Tani waa algorithm lagu sharaxay ama lagu fuliyay nidaamka CAE ee kaa caawinaya aqoonsashada noocyada dhirta. Markaad isticmaasho furaha, waxaad u baahan tahay inaad ka jawaabto su'aasha ku saabsan hal ama dhowr dabeecadood oo dalagga ah, tusaale ahaan, ku saabsan midabka inflorescences ama qaabka caleemaha.
Fure u ah qeexidda noocyada muruqyada waxaa lagu dhisay mabda 'dichotomous'. Si loo isticmaalo, waa lagama maarmaan marxalad kasta si loo barbardhigo jilibka qallooca leh laba calaamadood oo la soo jeediyey oo dooranaya qoraalka (oo lagu tilmaamayo lambar) ama diidmo (oo lagu tilmaamay "+"). Tallaabada xigta ka dib marka la doorto qoraalka iyo antithesis waxay noqon doontaa isbedelka lambarka la tilmaamay oo ka soo horjeeda sheyga la soo xulay.
1. Ubax waa mid buluug ah ama midab leh oo midab leh ... 2. + ubaxyada waa mid madow oo midab leh ... 7.
Sidaa darteed, haddii Muscari, nooca aad rabto in aad aqoonsatid, wuxuu leeyahay ubax midab madow, markaa waxaad u baahan tahay inaad dooratid antithesis oo aad tagto talaabo lambar 7. Haddii ubaxadu buluug yihiin ama u fudud yihiin, waxaad u baahan tahay inaad doorato "1" calaamad oo aad "2".
Iyada oo xulasho kasta oo ka mid ah qoraalka ama diidmada, waxaad sii wadi doontaa tallaabada xigta ilaa nooca dhirta la go'aamiyo.
Aqoonsiga noocyada ayaa sida ugu wanaagsan loo sameeyaa marka uu dhirta ku hayo booska dabiiciga ah ee xubnaha iyo midabka, i.e., gobolka cusub. Fure waxaa loo dhisaa sidan oo kale marka hore waxaa la soo jeediyey in lagu garto qaybaha kor ku xusan ee geedka, ka dibna dhulka hoostiisa, dhamaadka - calaamadaha lagu arki karo kaliya kororka muraayada weyn. Si aad si sax ah u go'aamiso noocyada, waxaa lagama maarmaan ah in la go'aamiyo qaab-dhismeedka warshadda heerkulka anatomical.
Fure u ah aqoonsashada noocyada muruqyada waxa laga heli karaa farta "Encyclopedia of the Garden of Ornamental Garden" (EDSR)
Waa muhiim! Aqoonsiga foomka adoo isticmaalaya furaha wuxuu noqon karaa mid kaliya. Wixii sharaxaad dheeri ah oo dheellitiran, waxaad u baahan tahay inaad tixraacdo ilaha awooda, tusaale ahaan, si loo jaangoyno, halkaasoo noocyadaasi ay si buuxda oo buuxda u sharraxan yihiin. Sidoo kale waa isbarbardhigga sawirrada sawirada warshadaha, oo lagu aqoonsanayo magaca aqoonyahanka, kaas oo laga heli karo internetka.
Ku dhowaad dhammaan noocyada ayaa ah kuwo lagu qurxiyo qaansada adder. Intaa waxaa dheer, noocyo xiiso leh oo ka mid ah muscari ayaa lagu sameeyey noocyada qaarkood.
Kuwa ugu caansan oo ku baahsan qurxinta qurxinta iyo beeraha waa Ermeni Muscari (Muscari armeniacum), ama Colchian Muscari (Muscari Colchicum). Magaca ubaxa wuxuu loola jeedaa dhulkiisa - Caucasus. Sidoo kale dabeecadda duurjoogta ah waxay ku nool yihiin barxadda buuraha iyo xajmiga Turkiga, Bartamaha iyo Galbeedka Aasiya, Mediterranean.
Waxaad ka heli kartaa qoob-ka-soo-saarka guud ee ubaxyada leh ubaxyo buluug ah oo madow, oo ay xuduud u tahay xuduud cad.
Si sare, ubaxa ee inflorescences waxaa lagu kala saaraa midab khafiif ah. Peduncle si aad u sarreeya - illaa 20 cm Muddada ubaxda - May. In height, ubax u gaaro 12-20 cm, ee inflorescence ku jira 40-50 dawanno. Waxay u dulqaadataa dhaxan.
Muscari Armenicum wuxuu ka mid ahaa kuwa ugu horreeya ee soo saaraya. Sidaa darteed, noocyada noocan ah, noocyo badan ayaa la nadiifiyaa, kuwa ugu caansan ee ay ka mid yihiin Blue Spike. Kala duwanaanshahan waa mid u gaar ah maxaa yeelay waxay soo saartaa ilaa 170 ubax oo mid ka mid ah inflorescence.
Sidoo kale ubax this waa ubax goor dambe - inta badan xilliga ubax soo socda laba toddobaad ka dib noocyo kale. Ubaxyada "Blue Spike" oo buluug ah, caleen, waxay leedahay caraf udgoon.
Ma taqaanaa? Qurxinta "Blue Spike" waxaa lagu abaalmariyay abaalmarin caalami ah 1963-kii.
Sidoo kale jecel u dhexeeya bannaanka u yihiin noocyo Alba, abuuritaanka Fantasy, Cantab, Christmas Pearl.
Ubaxa Muscari waxaa lagu beeray dhirta geedaha, ubaxyada, iskudhafka, loo isticmaalo bawlaha.
Muscari waa qaab shisheeye
Botrioides Muscari (Muscari botryoides) wuxuu soo jiitaa dareenka inflorescences waaweyn (10-15 cm ee dhererka) ubaxyo, buluug, iyo midab cad. Muddada ubax ee noocyada this bilaabmaa May, waqtiga ubax waa 12-20 maalmood. Peduncle wuxuu ka kooban yahay ilaa 40 garaac. Waxay leedahay heer aad u sarreeya ee hardiness jiilaalka. Noocaantan qarnigii lixaad wuxuu caadi u yahay dhaqanka beerta. Popular waa noocyada kala duwan ee caddaan, ubax-ka-dooxada, ubaxyada albaabka iyo musqulo leh ubax casaan ah - Carneum.
Marka laga soo tago beeritaanka ubaxyada beerta, muuska waa grozdavidny loo isticmaalo beeritaanka dhaqanka dheriga iyo jarista.
Waa muhiim! Dhammaan dhirta beeraha ee caleemaha jilicsan ayaa ah kuwo aan qabin. Waxay koraan labadoodaba hooska iyo qorraxda, iyagu ma dalbanayaan ciidda iyo waraabinta. Sidoo kale adkaysi u ah cudurrada iyo cayayaanka.
Muuqaalka ugu muhiimsan ee Muscari-ballaaran (Muscari latifolium) waa caleemaha, caleemaha sida lafaha. Ubaxyada noocyada noocan ah waa cufan, qaab cylinders, sare (ilaa 25 cm). Peduncles oo ku rinjiray midabo kala duwan: laga soo bilaabo hoose waxay yihiin buluug madow, ku dhowaad guduudan, bartamaha - buluug, oo u dhow sare - buluug. Mid kasta oo ka mid ah waxay haystaan ​​boqollaal garaac. Sidoo kale naasaha ballaadhan ayaa waxaa lagu gartaa muddo dheer ubax ah - 20-25 maalmood. Lover Heat.
Waxaa loo adeegsadaa koox-kooxeed.
Noocahan waxaa loo magacaabay midabkeedu yahay midab buluug ah oo ubax ah. Wakhtiga ubaxyada, cayayaanka ee musqulaha cirridka ah waxay u egyihiin sida ubaxyada ubaxa ee jilicsan. Hoosta noocan oo kale ah ayaa sii kordheysa soo jiidashada dareenka beeraha ubaxa. Gaar ahaan qiimaha leh waa White Rose Beauty kala duwan oo aan caadi ahayn caleemaha casaan. Laakiin si ay ula kulmaan Muscari waxay daaqadaha ka dillaacaan duurjoogta. Peduncles ee noocyada this yihiin kuwo aad u yar - 10-12 cm, ku jira 15-30 ubax. Tartanka this viper basbaas dhamaadka May ilaa 10-15 maalmood.
Muscari oo la qabtay
Muscari oo lagu qalo (Comosum Muscari) ayaa ka dhex muuqda noocyada kale ee inflorescence oo badan oo dabacsan oo leh furfurnaan midab buluug-buluug ah oo ku yaalla calaamadaha dheeriga ah. Foornada inflorescence waxay gaari kartaa 70 cm dherer ahaan. Warshadda lafteedu waxay kor u kacdaa ilaa 20 cm, waxay ku jirtaa xilli danbe - May iyo June. By dhamaadka ubaxa inflorescence sii kordhaya. Noocaani waa jiilaalka u adkaysta. In beerta inta badan beeray noocyo kala duwan Plumosum. Crested Muscari, oo aan caadi ahayn saameynta qurxinta, waxay u muuqan doontaa qurux badan oo isku dhafan leh dhirta dilka ah, oo ka soo horjeeda asalka daboolka dalagga.
Muscari Osh (Muscari aucheri / tubergenianum) waxaa lagu gartaa inflorescences gaaban (10-15 cm) oo ubaxyo buluug ah oo leh cirridta cirridka. Ku soo dhawow meesha ugu sarreysa guluubka ayaa lagu rifay midab fudud. Ubaxku wuxuu bilaabmaa Abriil. Muuqaal astaamo ah noocyada noocan ah, taas oo u qalantaa dareenka marka ay soo degaan, waa in aysan u dulqaadanayn qoyaan xad-dhaaf ah. Xilliga jiilaalka, waxay u adkeysan kartaa heerkulka ilaa -23 º.
Waa muhiim! Dhamaan qeybaha musqulaha waa sun.
In nooc ka mid ah growers ubax soo saaro tubergenianum Muscari, kaas oo lagu kala soocay midab khafiif ah ubax.
Noocyada caanka ah ee noocyadani waa Blue Magic, White Magic, Ocean Magic. Waxaa lagu beeray kooxo, jardiinooyin dhagax ah, oo loo isticmaalo bawlaha.
Inflorescences ee noocyada this waa ukunta-qaabeeya, ilaa 15 cm ee height. Ubaxa - yar yar (4-7 mm), buluug oo dhalaalaya. Naafada waa cadaan. May bilaabi kartaa in ay isla markiiba Bloom ka dib markii barafka dhalaalay. Muscari qurux (Muscari pulchellum) waxaa lagu gartaa caleemo aad u cidhiidhi ah (0.2-0.5 mm) oo leh geeso cirif leh. Muscari waxay ka tirsan tahay fasalka gaaban ee ubaxyada iyo ubaxyada yar yar - 7 ilaa 20 maalmood. Sidaa darteed, marka laga beerto xagaaga xagaaga, waxaa lagama maarmaan ah in aan ka soconin muddada ubax, laakiin laga bilaabo ubax hore.
Ka dib marka la isku daro blooms basasha, dhirta kale sanadlaha waxaa lagu beeray karaa meesheeda, taas oo weli leh waqti ay ku farxaan ubax dhamaadka xagaaga - bilowga xilliga dayrta. Ama waxaad u baahan tahay inaad hore u sii daryeesho beerashada agagaaraha dhirta kuwaas oo qarin kara aragtida xasaasiga ah ee Muscari ka dib markaad ubaxdo.